I-NPA isibekele uMengameli Zuma umnqamulajuqu | isiZulu
Isilomo seDowns sifake isicelo sokushiya
Umdlali oyisilomo esafika kwiMamelodi Sundowns usefake isicelo sokukhululwa kule kilabhu ecijwa nguPitso “Jingles” Mosimane ukuze ajoyine i-Orlando Pirates.
Umama ubelethe amawele, 'wawafaka' ethoyilethi lomgodi
Kuhlengwe usana olusanda kuzalwa kodwa kwashona iwele lalo ngemuva kokuba unina ebelethele endlini yangasese yomgodi eGa-Molepo, kusho amaphoyisa aseLimpopo.
I-NPA isibekele uMengameli Zuma umnqamulajuqu
Ihhovisi likaMengameli lidumele ngesinqumo senkantolo ngoZuma
I-ANC ngeke iphawule manje ngesinqumo senkantolo ngoZuma ne-NPA
Durban – INational Prosecuting Authority isibekele uMengameli Jacob Zuma umnqamulajuqu womhlaka-30 Novemba ukuba abeke izizathu zokuthi kungani kumele ahoxiswe amacala akhe enkohlakalo.
Lezi zindaba zivele esitatimendeni esikhishwe yi-NPA ngoLwesihlanu.
Lo mnqamulajuqu uza kulandela isinqumo sangesonto eledlule esakhishwa yiNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala sokuchitha isicelo se-NPA noMengameli Zuma sokuba kuguqulwe isinqumo seNkantolo eNkulu eyayalela ukuba sithathwe njengesiphambene nomthetho isinqumo sokuhoxiswa kwamacala kaMengameli.
Esitatimendeni ihhovisi likaMengameli lithi isinqumo, nakuba kungesidumazayo, besilindelekile.
Ihhovisi laphinde aveza ukuthi iNkantolo yokuDluliswa kwamaCala ithe lowo owayeyibamba likaMgqondisi wezokuShushiswa koMphakathi uMokotedi Mphshe wasebenzisa umthetho okungewona ofanele ngesikhathi ecubungula izethulo zikaMengameli Zuma ezenziwa kwi-National Prosecuting Authority (NPA).
Ngaleyo ndlela, isinqumo sokuhoxiswa kwamacala ayethweswe uMengameli Zuma kwavela ukuthi asikho emthethweni.
Ngemuva kwesinqumo sangesonto eledlule, amaqembu aphikisayo aveza ukuthi uZuma kanye ne-ANC bambuleke izinqa njengoba ingasekho into abazocasha ngayo manje.
Leli cala limayelana nezinkulumo eziqoshiwe, ezidume ngelamaSpy Tapes.
Kutholakale ezinye iziguli ezingu-8 kolwaseLife Esidimeni
Amaphoyisa athole ezinye iziguli eziyisishiyagalombili ezazihlala eLife Esidimeni kulandela ukuthi uMnyango wezeMpilo eGauteng, wabika ukuthi zidukile, kusho owe-DA uJack Bloom.
ISITHOMBE: Kushone ababili engozini eyenzeke ku-N4
Babili abasale enkundleni ngesikhathi kushayisana amaloli kuthela-wayeka u-N4, eMpumalanga.
Ningangihambeli phambili, kusho uRamaphosa etshela amaqembu aphikisayo ngolweKhabhinethi
UMengameli Cyril Ramaphosa uzishaye indiva izimfuno zamaqembu aphikisayo zokuthi enze izinguquko kwiKhabhinethi, wathi isimemezelo sizokwenziwa nguye "ngesikhathi esifanele".
UMbalula uthi akangaqondiswa izigwegwe uZuma
#UmkhabaMustFall - Ramaphosa
Owesifazane uthi wakhokhelwa ukufihla ubudlelwane bakhe noMengameli
Owesilisa udutshulwe wabulawa emngcwabeni kamfowabo
Kushone omunye futhi umdlali engozini yemoto
Cpt: 17-24°C Pta: 19-26°C
Jhb: 17-22°C Bloem: 16-30°C
Dbn: 23-27°C PE: 20-22°C
Cape Town - 05:10:15 AM CENTRAL LINE - a limited train service resumes from TODAY - trains will run on an hourly frequency - travel time to Cape Town will be in-excess of 90 mimutes Ezinye zasemigwaqeni